China Factory Rubber Seal Strip orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Tianzheng
Izahay dia manana fahefana amin'ny fanolorana karazana tombo-kase rehetra, tombo-kase tombo-kase, vokatra vita amin'ny fingotra namboarina, tombo-kase vita amin'ny fingotra izay miavaka ihany koa amin'ny fahitana avo lenta sy ny fahamendrehana tsara, ny fanoherana ny fitrohana entona. Ny toetra amam-panahy rehetra dia afaka manao tombo-kase fingotra be mpampiasa. Izahay dia manao ny fanandramana vokatra isan-taona. Ankoatr'izay, ny orinasanay dia manana laboratoara mahaleo tena, karazana fitaovana famokarana mandroso rehetra, miaraka amin'ny fitantanana tsara sy ny rafitra famokarana mahery, ny marika dia neken'ny besinimaro mpanjifa an-trano sy any ivelany.
Tombo-kase famehezana fingotra ho an'ny fananganana
Toerana niaviany: Hebei, Sina
Laharana modely: Namboarina namboarina
Serivisy fanodinana: famolavolana, fanapahana, fitrandrahana
Anaran'ny vokatra: Tady tombo-kase
Anti-ozon, fanoherana fahanterana: Tsara
Fitaovana: Epdm pvc silicon tpc cr
Item: tombo-kase fanamboarana
Fotoana fanaterana: 10 andro
Size: Faharavan'ny mpanjifa
Hamafisana: 20 ~ 90 morontsiraka a
Moq: 500 metatra
Fonosana: Kitapo plastika + baoritra
Fahaiza-mamatsy: tombo-kase 5 taonina / taonina isan'andro
Antsipirian'ny fonosana: 100 metatra isaky ny boaty
Ny sary famokarana, nahazo iso9001, iatf16949., Manana ekipa matihanina izahay, afaka manome vokatra avo lenta amin'ny fandefasana haingana. Ny orinasanay dia nandray ny tsipika fivoriambe mandroso, nitondra milina teknolojia avo lenta ho an'ny hatsaran-toetra fitiliana, nanangana rafitra vaovao hamoronana famokarana vaovao. Afaka mamorona vokatra vaovao izahay izay manome fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny fotoana fohy indrindra arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa.
Ny famafazana kodiarana amin'ny fanamboarana dia ampiasaina amin'ny varavarana mihodina, varavarankely ary varavarana fananganana sns. Ny tombo-kase vita amin'ny kofehy dia afaka mampiato ny rivotra, ny rano sy ny vovoka miditra amin'ny varavarana sy ny varavarankely, izay afaka miaro ny vavahady sy ny varavarankely ho salama sy mandeha tsara. ianao sy ny fianakavianao na ny mpiara-miasa aminao dia miasa tontolo milamina sy milamina. Izahay dia mijery bebe kokoa amin'ny fampiasam-bola amin'ny fampandrosoana teknolojia, mampifangaro ny fahendren'ny mpiasa rehetra ary nahazo zava-bita lehibe. Raisinay an-tanan-droa ny trano fonenan'ny mpanjifa sy ny malalaka hitsidika ny ozinina ho fitarihana. Tianay tokoa ny hametraka fifandraisana aminao.
Teo aloha: Tady am-baravarankely sy varavarankely
Manaraka: Tabilao Fiarovana amin'ny sisin'ny sisin-tany